“ Porn နှင့် Virility ကိုခြိမ်းခြောက်မှု” (TIME မဂ္ဂဇင်း) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
“ ညစ်ညမ်းသောအရာနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှု” (TIME မဂ္ဂဇင်း)
အမှု၌သင်တို့ကိုညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အကြောင်းကိုဒီ TIME ကအဖုံးပုံပြင်လွဲချော်, တက paywall နောက်ကွယ်မှမရှိတော့ပါ။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ Read.
နောဧသည်ဘုရားကျောင်းသူ 26 ခဲ့သည့်အခါသူကအင်တာနက်ပေါ်ရှိအဝတ်အချည်းစည်းဓါတ်ပုံတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လက်ပံ, Ore အတွက်9နှစ်အရွယ်အခြိနျပိုငျး wildland မီးသတ်သမားဖြစ်ပါတယ်။ သူကရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဗီဒီယိုများဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုသင်ယူခဲ့တယ်။ သူ 15 ခဲ့တဲ့အခါ, streaming ဗီဒီယိုများရောက်ရှိလာခဲ့, သူသည်သူတို့အားစောင့်ကြည့်။ မကြာခဏ။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက်, သူတို့ကိုယ်သူတို့ကြောင့်အမျိုးအစားကြည့်နေစဉ်လူတွေကမကြာခဏလုပ်ပေးသောအရာလုပ်နေတာ။
တစ်ခါတစ်ရံမိန်းမတယောက်ကနှင့်အတော်ကြာယောက်ျားတွေ, တခါတရံတွင်ပင်တစ်ဦးဆန္ဒအမျိုးသမီးတစ်ဦးအနေဖြင့်ပြီးနောက်သူကပြောပါတယ်ထိုဗီဒီယိုများသလောက်သူ့ကိုနှိုးဆှဘူး, ဒါကြောင့်သူကကွဲပြားခြားနားသော configurations မှအပေါ်ပြောင်းရွေ့, တခါတရံတွင်မယ့်အမျိုးသမီးတွေပတျသကျ။ "ငါစိတ်ကူးနိုင်ဘူးကျွန်မစိတ်ကူးဘာမှနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယတွေအများကြီးရှာနိုင်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ မှေးမှိန်မြား၏အယူခံဝင်ပြီးနောက်သူသည်နောက်တစ်နေ့အဆင့်အထိမကြာခဏပိုပြီးအကြမ်းမဖက်ပိုမိုပြင်းထန်သောအပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
အထက်တန်းကျောင်းသူ၏အကြီးတန်းနှစ်တွင်, သူအစစ်အမှန်မိတ်ဖက်အတူအမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမကသူ့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌သူမ၏အိပ်ခန်းထဲမှာအဝတ်အချည်းစည်းခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုအားဖြင့်သရုပ်ပြအဖြစ်သူကသူမနှင့်အထံတော်သို့သူမဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဝင်စားဖြစ်မထင်ခဲ့ပေ။ "ကျွန်မရဲ့စိတ်တွင်မည်သို့ငါ့ကိုယ်တုံ့ပြန်လိုခငျြသောအရာကိုအကြားဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ရှိခဲ့သည်" လို့သူကပြောပါတယ်။ သူကရိုးရှင်းစွာသွားလိုအပ်သောဟိုက်ဒရောလစ်မရနိုင်ဘူး။
ကန့်သတ်အချိန်များအတွက်, TIME ကအားလုံးစာဖတ်သူများစာရင်းပေးသွင်းထားသူသာပုံပြင်များကိုအထူး access ကိုပေးကမ်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြီးပြည့်စုံသော access ကိုအဘို့, ကျွန်တော်တစ်ဦးစာရင်းပေးသွင်းထားသူဖြစ်လာရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သူကပထမဆုံးတိုင်မားအာရုံကြောတွေကိုလျှော့ချခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ခြောက်နှစ်ကြာသွားတယ်၊ ဘယ်အမျိုးသမီးနဲ့ပဲရှိနေပါစေသူ့ကိုယ်ခန္ဓာကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတော့ဘူး။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသာကြည့်ခဲ့သည်။ ချာ့ချ်ကသူ၏မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အင်တာနက်အားအလိုလိုကျစွာပြုခြင်းသည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေပြီးသူ၌အချို့သောညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (PIED) ဟုခေါ်ဝေါ်သောအရာများရှိသည်ဟုယုံကြည်လာသည်။
လူငယ်များစွာသည်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများကိုယိုယွင်းပျက်စီးစေသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်၊ သူတို့၏ ဦး နှောက်များသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဖြင့်သုတ်သင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့၏မျိုးဆက်များသည်အကြောင်းအရာများကိုအလျင်အမြန်နှင့်သီးသန့်ပေးပို့နိုင်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကိရိယာများတွင်၎င်းတို့၏ ဦး နှောက်များသည်ပလတ်စတစ်ပိုများသောအချိန် - နောက်ပိုင်းဘဝများထက် - အမြဲတမ်းအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသောအချိန်တွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်ပမာဏနှင့်မျိုးကွဲများဖြင့်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤလူငယ်များသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာအောင်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းမပြုသည့်မင်တီးနီးယားဝက်များကဲ့သို့ခံစားရသည်။ စမ်းသပ်မှု၏ရလာဒ်များသည်စာသားအရကျဆင်းသွားသည်ဟုသူတို့ဆိုကြသည်။
ဒါကြောင့်သူတို့ကယောက်ျားတွေကိုညစ်ညမ်းမှုကနေလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးမယ့်အွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းအုပ်စုများ၊ စမတ်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ပညာရေးဗီဒီယိုများကိုပြန်ဖန်တီးနေကြသည်။ သူတို့ကဘလော့ဂ်တွေ၊ podcasts တွေကိုစတင်ခဲ့ပြီးလူအများပြောနိုင်တဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုသူတို့ယူခဲ့ကြတယ်။ Porn သည်သစ္စာရှိသူများနှင့်အမျိုးသမီးဝါဒီများအကြားဝေဖန်မှုများအမြဲတမ်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ယခုမူကားပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အနေဖြင့်အရှိန်အဟုန်ပြင်းထန်သောနှိုးစက်အချို့သည်လူကြိုက်အများဆုံးသုံးစွဲသူများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
လိင်မှုဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်နိုင်ချေထက်ကျော်လွန်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစိုးရိမ်မှုများစွာရှိနေသည်။ ၎င်းတွင်အမျိုးသမီးများ၏ယုတ်ညံ့မှုကိုမကြာခဏကျင်းပလေ့ရှိပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုအားပုံမှန်ဖြစ်စေသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလကထိုပြissuesနာများကြောင့်ဗြိတိန် ၀ န်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်အစိုးရသည်ယခင်ကအင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုအသုံးပြုသူမှမရွေးချယ်ပါကအရွယ်ရောက်သူအကြောင်းအရာများကိုစီစစ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်၊ ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကို၎င်းတို့၏သုံးစွဲသူများအသက်ကိုစစ်ဆေးရန်သို့မဟုတ်ဒဏ်ငွေနှင့်ရင်ဆိုင်ရန်တောင်းဆိုသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအားပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအပြီးတွင်ယူတီဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကတညီတညွတ်တည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုအသစ်များသည်လူငယ်များ၏သီအိုရီများကိုအထောက်အကူပြုစေပြီး၊ ကွန်ပျူတာဆက်သွယ်မှု၊ လိင်အပျော်အပါးနှင့်သင်ယူမှုအတွက် ဦး နှောက်၏ယန္တရားများသည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုကိုအလွန်ဆိုးရွားစေပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။
Gabe Deem (အသက် ၂၈ နှစ်) သည် porn သည်အိမ်စာသို့မဟုတ်ဝက်ခြံကဲ့သို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ "ဒါဟာပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်နေရာတိုင်း၌ရှိ၏" ဟုသူကဆိုသည်။ သူသည် X-rated အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်လာသည့်ခေတ်တွင်ကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးသူနှင့်သူ့သူငယ်ချင်းများသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောဗွီဒီယိုများကိုအဆက်မပြတ်ကြည့်လေ့ရှိသည်၊ စာသင်ခန်းအတွင်း၌ပင်သူတို့၏ကျောင်းထုတ်လပ်တော့ပ်များတွင်သူကပြောသည်။ “ ငါတို့ရှက်တာမဟုတ်ဘူး။ Irving တွင်နေထိုင်သော Deem သည် Reboot Nation ကိုတည်ထောင်သူဖြစ်ပြီးဖိုရမ်နှင့်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းသည်ဟုယုံကြည်ကြသောလူငယ်များအတွက်အကြံဥာဏ်နှင့်အထောက်အပံ့များပေးသောကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကြောင့်ထွက်ခွာလိုကြသည်။
သူသည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကလိင်အရတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပြီးညစ်ညမ်းသောအရသာကိုသာစားသုံးခဲ့သောကြောင့်သူသည်ညစ်ညမ်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများစွာနှင့်အနည်းငယ်ခြားနားသည်။ ဒါပေမယ့်သူကသူ့အစားအစာကိုလွှမ်းမိုးလာတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းပြီးလို့နှစ်အနည်းငယ်မှာ“ ငါကသာယာလှပတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ရောက်လာပြီးလိင်ဆက်ဆံဖို့သွားတော့ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလုံးလုံးတုံ့ပြန်မှုမရှိခဲ့ဘူး” လို့သူကပြောပါတယ်။ ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းကကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့အတွက်ကောင်မလေးကိုအရမ်းစွဲလမ်းခဲ့တယ်။ သူကသူ့ဆရာဝန်ဆီသွားတယ်။ testosterone ဟော်မုန်းနည်းတဲ့ဘန်းစကားကိုသုံးပြီး Deem ကပြောတယ်။ "သူကရယ်တယ်။ "
သူ၏အဖြစ်အပျက်နှင့်ပါတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထိုအချိန်ကအမည်မဖော်လိုသူသူ၏ရည်းစားကအတည်ပြုသည်။ “ သူကတစ်ခုခုကိုကြိုးစားလုပ်မယ်၊ ပြီးတော့သူကအလယ်မှာ 'ငါတို့စောင့်သင့်တယ်ထင်တယ်' လို့ပြောလိမ့်မယ်။ “ ငါတကယ်စိတ်ရှုပ်သွားပြီးသူငါ့ကိုမကြိုက်ဘူးလားလို့စဉ်းစားမိလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်နေတာလဲ?" သူကသူမနှင့်အတူဖျော်ဖြေနိုင်သည့်အတွက်သူ၏ပြproblemနာကိုပြောပြပြီးနောက်ကိုးလကြာခဲ့သည်။
ED နှင့်လက်တွဲဖော်ရှိခြင်းသည်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးအများစုသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည့်အဓိကပြproblemနာမဟုတ်ပါ။ အချို့သောအမျိုးသမီးများကမူစွဲလမ်းသည်ဟုခံစားကြရသည်ဟုဆိုကြသော်လည်း၎င်းတို့သည်ဤအကြောင်းအရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောယဉ်ကျေးမှု၌ကြီးထွားလာခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်မကင်းပါ။ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများသည်ယောက်ျားများသည်၎င်းတို့အားကိုယ်ခန္ဓာဆံပင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များမ ၀ င်နိုင်အောင် porn starlets ကဲ့သို့ပြုမူရန်မျှော်လင့်နေသည်ဟုတိုး။ သတင်းပို့သည်
၂၀၁၅ ခုနှစ်Aprilပြီလတွင် Alexander Rhodes သည်ညစ်ညမ်းသောအလေ့အထနှင့်ရုန်းကန်နေရသောသူများအတွက်အကြံပေးခြင်းနှင့်ရပ်ရွာလူထု၏ပံ့ပိုးမှုကွန်ရက်များတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ဂူးဂဲလ်နှင့်အလုပ်ကောင်းခဲ့သည်။ သူသည် NoFap subreddit ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်နာမည်ကြီး ၀ က်ဘ်ဆိုက် Reddit နှင့်တွဲဖက် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဘာသာရပ်တစ်ခု၏တင်ဆက်မှုစာရင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်သည်အချိန်ပြည့်ကြိုးစားမှုဖြစ်သည်။ (ထိုအမည်မှာ fap မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်အင်တာနက်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ) အသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သောအသက် ၂၆ နှစ်အရွယ်ရှိသူသည် porn ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ထိတွေ့ခြင်းသည် pop-up ကြော်ငြာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူကျိန်ဆိုသည်မှာ - ၁၁ နှစ်အရွယ်တွင်ဖြစ်သည်။ ပဲင်စီလ်ဘေးနီးယားတွင်ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူသည် ၃ နှစ်အရွယ်ကတည်းကကွန်ပျူတာများနှင့်ကစားရန်အားပေးခဲ့သည်။ ရော့ဒ်စ်ဤသို့ပြောပြသည် -“ အင်တာနက်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်သည်အတော်အတန်ပိတ်ပင်ထားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဤကြော်ငြာသည်မုဒိမ်းမှုပြသည့် site တစ်ခုအတွက်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်သူသည်အဝတ်အချည်းစည်းရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ရှိကြောင်းကိုသာသူနားလည်ကြောင်းပြောသည်။ မကြာခင်မှာပဲသူမဟာ“ မိန်းကလေးတွေ ၀ မ်းဗိုက်” ဒါမှမဟုတ်“ လှပသောမိန်းကလေးများရဲ့ boobies” အတွက်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ရှာဖွေမှုရလဒ်တွေကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ သူ့အသက် ၁၄ နှစ်တွင်သူသည်တစ်နေ့လျှင် ၁၀ ကြိမ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနှစ်သက်စွဲလမ်းနေသည်ဟုသူကပြောသည်။ "ဒါကချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ဘူး" ဟုသူကအခိုင်အမာပြောဆိုသည်။ ဒါကဗီဒီယိုဂိမ်းကစားတာပဲ။
ဆယ်ကျော်သက်နှောင်းပိုင်းမှာသူရည်းစားရလာတဲ့အခါအခြေအနေမကောင်းဘူး။ ရိုဒ်စ်ဤသို့ပြောပြသည် -“ ကျွန်မသူ့ကိုတကယ်စိတ်ထိခိုက်စေတယ်။ အခြားသူတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ သူကမိန်းကလေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန် porn ကိုစဉ်းစားခြင်းရပ်တန့်ပါကသူ့ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံးခဲ့ရဟုသူကဆိုသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကျိန်ဆိုခြင်းမပြုမီအကြိမ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းမှုမှထွက်ခဲ့သည်။ သူ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှစ်ခုတွင်အဖွဲ့ဝင် ၂၀၀,၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး၎င်းတို့သည်တစ်လလျှင်ထူးခြားသောအသုံးပြုသူတစ်သန်းခန့်ရရှိသည်ဟုသူကဆိုသည်။
ဤအမျိုးသားများနှင့်သူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ်အပျက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသောထောင်နှင့်ချီသောအခြားသူများက၎င်းတို့သည် antisex မဟုတ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေရန်အလွန်စိတ်သောကရောက်နေသည်။ ဒီမန်းကဒီလိုပြောတယ် -“ ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်တော့တဲ့အကြောင်းရင်းကပိုပြီးလိင်ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်တယ်။ ရော်ဒ်စ်က“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစွန့်လွှတ်တာဟာလူတွေလုပ်နိုင်တဲ့လိင်အပြုသဘောဆောင်ဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အွန်လိုင်းမှcommentီကာဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သော sirrifo က ပို၍ ရိုးရှင်းစွာပြောလိုက်သည် -“ ငါဟာနောက်တဖန်လိင်မှုကိစ္စကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အခြားသူတစ် ဦး ဦး ရဲ့ဆန္ဒကိုခံစားချင်တယ်။ ”
porn-သွေးဆောင် ED ၎င်းတို့၏တောင်းဆိုချက်များမဆိုကုသိုလ်ရှိပါသလား? မကြာမီကစာရင်းဇယားတချို့ဆက်စပ်မှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ 1992 မှာတော့ယောက်ျား၏အကြောင်းကို 5% ကနျြးမာရေး၏အမေရိကန်အမျိုးသား Institute (NIH) အရအသက်အရွယ် 40 မှာ ED ခံစားခဲ့ရသညျ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ၏ဇူလိုင်လ 2013 ဂျာနယ်ထဲမှာတစ်ဦးကလေ့လာမှု ED များအတွက်အကူအညီရှာကြံအရွယ်ရောက်ပြီးသူတို့သညျလူ 26% 40 အောက်မှာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ 2014 ထက်အသက်ငယ် 367 အမေရိကန်စစ်ဘက်ပုဂ္ဂိုလ်များတစ်ဦး 40 လေ့လာမှုမှာတော့တတိယ ED ကဖော်ပြခဲ့သည်။ 2012 မှ 18: နှင့်တစ်ဦး 25 ဆွစ်ဇာလန်လေ့လာမှုပင်လူပျို၏တတိယအကြားအခြေအနေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီတွေ့ရှိချက်တွေအတွက်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိနိုင်ပါတယ်။ Viagra နှင့်အလားတူဆေးဝါးများပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုသတိပြုမိခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းတို့သည်အလွန်မြင့်မားပြီးတီဗီကြော်ငြာအားလုံး၏ကျေးဇူးကြောင့်အမည်းစက်သည်သက်ဆိုင်မှုနည်းပါးသဖြင့်လူအများက ၀ န်ခံနိုင်သည်။ ဆီးချိုရောဂါ၊ အဝလွန်ခြင်း၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ကျခြင်းတို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အရက်အလွဲသုံးခြင်းကဲ့သို့သောအခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤအရာသည်လူငယ်များကြားတွင်မြင့်တက်လာသကဲ့သို့ ED သာဓကများလည်းရှိနိုင်ပါသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုအပြစ်ဖို့ရမယ့်အရာလို့ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်တွေကမပြောချင်ပါဘူး။ အမျိုးသားများမျိုးပွားခြင်းနှင့်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းဥက္ကpresident္ဌဖြစ်သူဒေါက်တာ Ajay Nangia က“ ဒါဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဒီလူတွေအပေါ်အထင်သေးစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့သဘောမျိုးရှိတာပေါ့။ သူတို့ဟာရုပ်ရှင်ရုံမှာလိင်ဆက်ဆံတာနဲ့လိင်တူချင်းဆက်ဆံတာကိုခံရတဲ့အထိခံစားရတယ်။
အကယ်၍ ED တိုးတက်မှု၏အကြောင်းရင်းများသည်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများဖြစ်လာနိုင်လျှင်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်း streaming video မှတစ်ဆင့် porn ကိုယခင်ကမကြုံစဖူးလက်လှမ်းမီခြင်းမရှိပါ။ ဗီဒီယိုဆိုက်များပေါ်ပေါက်လာခြင်း (YouTube (၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည့်)၊ အသုံးပြုသူများသည်ဗီဒီယိုများတင်ခြင်း၊ စုစည်းခြင်းနှင့်စုစည်းခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်) သည်လူတို့၏ညစ်ညမ်းမှုကိုကြုံတွေ့ရပုံကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ အပျော်တမ်းများမှပရော်ဖက်ရှင်နယ်များအထိမည်သူမဆို၊ ဗွီဒီယိုကိုအွန်လိုင်းမှာတင်ထားလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဆက်မပြတ်တိုးချဲ့နေတဲ့အံ့အားသင့်စရာကွဲပြားခြားနားတဲ့အခမဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ လွတ်လပ်သော ၀ က်ဘ်ခြေရာခံကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၈ သန်းကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူဆိုက်များသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဆယ်နှစ်အကြာတွင် ၁၀၇ သန်းအထိရှိခဲ့သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူဆိုဒ်ဖြစ်သော Pornhub မှဗီဒီယိုဝေမျှသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကတစ်နာရီလျှင် 2005 ည့်သည် ၂.၄ သန်းရရှိပြီး၊ ၂၀၁၅ တွင်တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိလူများသည် ၄ ​​င်း၏ပါဝင်မှု၏နာရီ ၄,၃၉၂,၄၈၆,၅၈၀ ကိုကြည့်ရှုခဲ့သည်၊ Homo sapiens သည်မြေကြီးပေါ်တွင်နေသမျှကာလပတ်လုံး။ Porn သည်နေရာအနှံ့တွေ့နေရသည်။ ၎င်းသည် "တည်ရှိခဲ့လျှင်၎င်းသည် porn ဖြစ်သည်" ဟုပြR္ဌာန်းသည့်နည်းဥပဒေ ၃၄ အပါအ ၀ င်မှတ်တမ်းများကိုချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ (Leprechauns? Check ။ Pterodactyls? Check ။ Pandas? Check ။ ) အင်တာနက်သည် ၂၄ နာရီ All-You-Can- စားနိုင်သောဘူဖေးစားသောက်ဆိုင်နှင့်တူသည်။
ထိုလူငယ်များကကိုက်စားနေကြသည်။ Bristol တက္ကသိုလ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလေ့လာမှုအရဗြိတိန်သားယောက်ျားလေးများ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသည်အသက် ၁၄ မှ ၁၇ နှစ်ကြားသာမှန်မှန်စောင့်ကြည့်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ နယူးယောက်တက္ကသိုလ်မှမီဒီယာလေ့လာမှုဆိုင်ရာတွဲဖက်ပါမောက္ခ Chyng Sun ကလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်သူလေ့လာခဲ့သည့်အမျိုးသား ၄၈၇ ဦး ၏ထက်ဝက်နီးပါးသည် ၁၃ နှစ်မပြည့်ခင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်လူငယ်များအတွက် ၁၂ နှစ်ဖြစ်သည်။
လူငယ်များ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအကြီးအကျယ်လူမှုရေးအပြောင်းအလဲသည်များသောအားဖြင့်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာအားအကဲဖြတ်ရန်အားကောင်းသောသုတေသနပြုချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်အတွက်မဟုတ်ပါ။ ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်မှစိတ်ကျန်းမာရေးသုတေသီဖြစ်လာသူလိင်ပညာပေးသူ Janis Whitlock ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမည်မျှကျယ်ပြန့်သည်ကိုလေ့လာရန်ရန်ပုံငွေရရှိရန်ပင်ခဲယဉ်းသည်။ NIH ၀ န်ထမ်းများကသုတေသီများအားဖြစ်နိုင်လျှင်ဖြစ်နိုင်လျှင် ၄ င်းတို့၏ရန်ပုံငွေလျှောက်လွှာများတွင်လိင်ဟူသောစကားလုံးကိုအသုံးမပြုရန်အကြံပေးသည်။ ညစ်ညမ်းမှုကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုလေ့လာမှုတွင်လေ့လာခဲ့သူစိတ်ပညာသိပ္ပံပညာရှင်ဆီမွန်ကွန်းကမက်စ်ပက်ခ်ျအင်စတီကျူ့မှအလုပ်ရှင်များသည်သူမနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကိုမကျေနပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သုတေသနကင်းမဲ့ခြင်းသည်ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း၏ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်းထန်သောတိုက်ခိုက်မှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ ရလဒ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသောသိပ္ပံပညာသိပ်မများလှပါ။
ဂယ်ရီ Wilson က, 59 မှာဟောင်းတစ်ဦးအခြိနျပိုငျးတွဲဖက်ဇီဝဗေဒပါမောက္ခ: အဆိုပါငယ်ရွယ် porn ရှောင်ကြဉ်တစ်ခုမဖြစ်နိုင်ဂုရုများပြုပါ တောင်ဘက် အော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအသက်မွေးမှုကျောင်းများနှင့် Porn ပေါ်မှသင့်ဦးနှောက်၏ရေးသားသူ: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံ။ မိမိအက်ဘ်ဆိုက်, yourbrainonporn.com, သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလေ့ YBOP, မိုးသည်းထန်စွာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြား link ကိုပံ့ပိုးသောသတငျးအခကျြအဘို့အ Clearinghouse ဖြစ်ပါတယ်။ လူအတော်များများထက်ပို 2012 သန်းအမြင်များရှိပြီးမိမိ6TEDx ဆွေးနွေးချက်အားဖြင့်သူ့ကိုရှာပါ။
YBOP ကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင် onanistic ပစ္စည်းများအလွန်အကျွံကြည့်ခြင်းသည် ဦး နှောက်ကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်သည်ဟုဆိုပါသည်။ Wilson ကသူမက "porn ကသင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ကို porn နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ ၎င်းတွင်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာသာမကပေးပို့သည့်နည်းလမ်းလည်းပါ ၀ င်သည်။ ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများသည်အကန့်အသတ်မရှိ၊ လွတ်လပ်၍ မြန်ဆန်သောကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုနှေးကွေးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်မြင်ကွင်းအသစ်သို့မဟုတ်အမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုကိုကလစ်နှိပ်လိုက်နိုင်ပြီးယင်းကသူတို့၏နိုးကြားမှုပုံစံများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသောအသစ်အဆန်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုအချိန်ဇယားနှင့် dopamine ပမာဏမြင့်မားစွာရရှိခြင်းကဤပုံစံများကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ Wilson အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင်အချို့သောအင်တာနက်အသုံးပြုသူများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကို ဦး နှောက်တွင်ပိုမိုလျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ပြီးတော့လေ့ရှိပါတယ်: တူညီတဲ့ hit ရဖို့ပိုလိုအပ်ကြောင်း။ dopamine ကိုမြှင့်တင်ပေးသူအားလုံးဟာအလွန်အမင်းအသစ်အဆန်း၊ ၀ တ်စုံအချို့၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွပေးဖို့လိုတယ်။
အခြားသောသုတေသီများသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအကြားမည်သည့်ဆက်နွယ်မှုကိုမဆိုပယ်ချကြသည်။ ” သိပ္ပံနည်းကျအချက်အလက်များကိုထောက်ပံ့ခြင်းမရှိသောကြောင့် [ဤလူငယ်များ၏] စွဲလမ်းမှုအားဖြင့် ED ကိုညစ်ညမ်းစေသောအကြောင်းတရားများသည်သူတို့၏ယုံကြည်ချက်ခိုင်လုံမှုအတွက်သက်သေမဟုတ်ပါ” ဟု David J. Ley သည်လက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်နှင့် Myth of Sex စွဲလမ်းမှုကိုရေးသားသူဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူအများစုသည်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းဖော်ပြကြသည်။ အလွန်သေးငယ်တဲ့လူနည်းစုကဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ED အကြောင်းကိုအစီရင်ခံတင်ပြနေတယ်။ ”
လိင်မှုဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်မှ ၂၀၁၅ စာတမ်းကဲ့သို့ porn ကိုအသုံးပြုသောလူငယ်များကိုမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုများမှခရိုအေးရှားနိုင်ငံ၊ Zagreb မှသုတေသီများသည်ဥရောပသုံးနိုင်ငံမှလိင်တက်ကြွနေသောလိင်တူဆက်ဆံသူလူငယ် ၄၀၀၀ ခန့်အားလေ့လာမှုများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့် erectile ပြproblemsနာများအကြားအနည်းငယ်အနည်းငယ်ဆက်စပ်မှု။ (ပြီးတော့ခရိုအေးရှားမှသာဖြစ်သည်။ ) အခြားတစ် ဦး ကဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်သူတို့စွဲလမ်းနေသည်ဟုထင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ စိတ်ပညာရှင်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်နီကိုးလ်ပရပ်စ်နှင့် ဦး နှောက်သုတေသနကုမ္ပဏီဖြစ်သော Liberos ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်း PIED သည်ဒဏ္myာရီဆန်သောအယူအဆတစ်ခုဟုယုံကြည်သည်။ “ လေ့လာမှုအများစုက ED ကိုစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းပြသခဲ့သည်။
လူငယ်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအတွက်မူပြပွဲ A သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဇီဝကမ္မဗေဒဖြစ်သည်။ "သင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကိုရနိုင်ပြီးညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံကိုမရရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါကကျွန်တော့်အမြင်မှာသက်သေအထောက်အထားတွေရနေသလိုပဲ" ဟု Deem of Reboot Nation မှပြောကြားသည်။ သူကသူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်အခြားအကြောင်းပြချက်အားလုံးဖြတ်သန်းသွားသည်။ အတွေ့အကြုံမရှိဘူးလား။ သူက“ ကျွန်မဟာ ၁၄ နှစ်အရွယ်ကတည်းကလိင်ယုံကြည်မှုရှိပြီးအတွေ့အကြုံရှိသူပါ။ အဝလွန်ခြင်းလား သူက ၁၀% အောက်ခန္ဓာကိုယ်အဆီအောက်မှာကိုယ်ပိုင်အသိအမှတ်ပြုသင်တန်းနည်းပြတစ်ယောက်ပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု သူသည်သူ့ဘဝတွင်အဆစ် ၅ ခုခန့်ကိုဆေးလိပ်သောက်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မွန်းတည့်အချိန်မှာအော့ဖ်လိုင်းကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှသူက ED ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်မှုအတွက်စိုးရိမ်စရာမရှိခဲ့ပါဘူး။ “ ငါကွန်ပျူတာကိုနှစ်ခါပြန်စစ်ဆေးခဲ့တယ်။ ငါ porn နှင့် Bam ဖွင့်! "
ဤလူငယ်များရင်ဆိုင်နေရသည့်ပြeyနာများအပြင်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူတိုင်းကိုခေတ္တရပ်တန့်စေသင့်သည့်သုတေသနများလည်းပေါ်ထွက်လာသည်။ မက်စ်ပလက်ခ်အင်စတီကျု့မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် fMRI လေ့လာမှုအရပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည် ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ စာရေးသူKühnက“ ယောက်ျားတွေကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုများများစားစားသုံးစွဲလေလေ၊ ဦး နှောက် striatum နည်းလေလေ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုကြည့်တဲ့သူတွေကဒီဒေသတစ်ခုတည်းမှာပဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံတွေကိုတုံ့ပြန်မှုနည်းတယ်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်ပိုမိုများပြားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာသုံးစွဲသူများသည် ပိုမို၍ စိတ်မသက်မသာဖြစ်ပြီးဆန္ဒပြည့်မှုကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှ ဦး နှောက်ကိုစူးစမ်းလေ့လာမှုအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြင့်အမျိုးသားများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတုန့်ပြန်သည့်ပုံစံအတိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာကလစ်များနှင့်တုန့်ပြန်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သူတို့မကြိုက်ရင်တောင်သူတို့တပ်မက်ခဲ့တယ်။
လေ့လာမှုတွင် ဦး နှောက်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် Valerie Voon မှသူမ၏အကြီးအကျယ်ညစ်ညမ်းသောဘာသာရပ်များသည် erectile ပြissuesနာများရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်သူမနှင့်Kühnနှစ် ဦး စလုံးကဤအဘယ်သူအားမျှ porn ဦး နှောက်ကျုံ့ကြောင်းသက်သေပြမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုမိ; သေးငယ်တဲ့ဆုစင်တာများရှိသူများသည်တူညီသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရရှိရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်လိုသည်။ “ ဦး နှောက်ကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ရုပ်ပုံလေ့လာမှုတစ်ခုလုပ်ဖို့သတိထားသင့်တယ်။ လေ့လာမှုအသစ်တွေလိုတယ်။
ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆိုင်သောအငြင်းပွားမှုများသည်ဆေးပညာနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များအကြားလောင်းကစားခြင်းနှင့်စားခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူစွဲလမ်းမှုများကိုခွဲခြားရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများကဲ့သို့သောဆေးစွဲမှုနှင့်အမျိုးအစားတူသည့်သဘောထားကွဲလွဲမှု၏ကွဲပြားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ။ မြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာအစာစားချင်စိတ်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖော်ပြရန်စွဲလမ်းမှုဟူသောစကားလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကျိုးမရှိသောကြောင့်၎င်းအားပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖြစ်စေခြင်းဖြင့်ပြproblemနာကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်ဟု Prause ကငြင်းဆိုသည်။
သို့သော်စွဲလမ်းမှုများကိုလေ့လာသော Voon သည်မတူကွဲပြားသောညစ်ညမ်းသောစောင့်ကြည့်ခြင်းကို၎င်းသည်အခြားစွဲလမ်းမှုများထက်အသစ်အဆန်းအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောအစာစားချင်စိတ်အပါအဝင်ကွဲပြားသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသော်လည်းသေချာသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလှုံ့ဆော်မှုများပေါင်းစပ်ခြင်းကအသစ်အဆန်းအပြင်ထပ်မံအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်မှာဖြစ်နိုင်သည်။
Brian Anderson သည် Johns Hopkins တက္ကသိုလ်မှသိပ္ပံဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး တွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်သီအိုရီတစ်ခုရှိသည်။ မိမိအအထူးပြုအလေ့အထဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်၏ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်သူ၏အသင်းသည်လေ့လာမှုတစ်ခုအားဆုချခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုများကိုထပ်မံကြုံတွေ့ရပါကလျစ်လျူရှုရန်ခက်ခဲကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဦး နှောက်သည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောလှုံ့ဆော်မှု၏သက်သေအထောက်အထားများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါက၎င်းသည်ပိုမိုအာရုံစိုက်ကာအခြားလှုံ့ဆော်မှုများကိုတားဆီးနိုင်သည်။ “ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကအဲဒီပုံစံတွေကိုတီထွင်ဖို့ကြိုးတပ်ထားတယ်။ မင်းကသူတို့ကို porn လိုမျိုးနဲ့ချိတ်လိုက်ရင်အဲဒါကအရမ်းအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
သူကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဦး နှောက်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်။ သူကသူက“ အားစိုက်ပြီးမြန်ဆန်တဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုဘက်လိုက်တယ်။ ဦး နှောက်ကဒီအသင်းအပင်းကိုအလျင်အမြန်လေ့လာသွားမှာပါ။ လူတွေရဲ့မျက်မှောက်ခေတ်ဘ ၀ တွေဟာကွန်ပြူတာအရမ်းများတဲ့အတွက်နေရာတိုင်းမှာညစ်ညမ်းတဲ့သတိပေးမှုတွေရှိနေတယ်။ သူက“ အချိန်တန်ရင်သင် browser ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး porn အကြောင်းပဲစဉ်းစားတော့တာပါပဲ။ ” (ဒါက virtual reality နည်းပညာကအရာဝတ္ထုအားလုံးကိုအဆင့်အသစ်တစ်ခုမတိုင်မီဖြစ်သည်။ )
ညစ်ညမ်းသောအရာအားလုံးကိုညစ်ညမ်းစေသောဆယ်ကျော်သက်များကဖွံ့ဖြိုးဆဲဆဲဆဲ ဦး နှောက်ထဲတွင်အစာကြေအောင်ပြုလုပ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်အထူးသဖြင့်ထိခိုက်လွယ်နိုင်သည်။ စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှစိတ်ပညာပါမောက္ခ (နှင့်ထင်ရှားသောစတန်းဖို့ဒ်အကျဉ်းထောင်စမ်းသပ်မှုလုပ်ခဲ့သူ) Philip Zimbardo ကညစ်ညမ်းရုပ်သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်အတူတကွချိတ်ဆက်လေ့ရှိပြီးတတ်နိုင်သလောက်အလေ့အထပုံသဏ္toာန်တူအောင်ညှိနှိုင်းထားသည်။
“ Porn ကသင့်ကိုလက်ရှိ hedonistic အချိန်ဇုန်ဟုခေါ်တွင်သည်။ "မင်းကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အသစ်အဆန်းကိုရှာပြီးအခုအချိန်မှာအသက်ရှင်နေတယ်။ " ဓာတုဗေဒစွဲလမ်းမှုမရှိသော်လည်းညစ်ညမ်းမှုသည်မူးယစ်ဆေးစွဲသည့်အပြုအမူအပေါ်တွင်တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုသူကဆိုသည်။ “ ပြီးတော့ဒီပြtheနာကသင်ပိုပိုပြီးလုပ်လာတာနဲ့အမျှသင့် ဦး နှောက်ရဲ့ဆုရစင်တာများကနှိုးဆွမှုစွမ်းရည်ကိုဆုံးရှုံးသွားစေပါတယ်။ လူငယ်များသည်သူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးရောက်နေချိန်တွင်မလှုပ်မရှားမှုအားလုံးသည်မမျှော်လင့်သောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုသူကပြောသည်။
နော Church ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်အခြားသူများအားသူတို့၏ဘ ၀ မှညစ်ညမ်းမှုကိုဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး PMO (အပြာ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ အော်ဂဇင်) ဟူသောအကျင့်ကိုဖျောက်ဖျက်ရန်တစ်ပတ်လျှင်နာရီ ၂၀ ခန့်ကြိုးစားသည်။ သူသည်၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အခမဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုရေးသားခဲ့သည်။ ၀ က်ခ်သည်စွဲလမ်းထားသည့်အင်တာနက်ပေါ်မှဝက်ဆိုက်ကိုဖွင့်ပြီး Skype မှလူများအားဒေါ်လာ ၁၀၀ ပေး၍ အကြံပေးသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Rhodes သည်လူငယ်များ PMO ကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးစားသည့်“ စိန်ခေါ်မှုများ” ကိုစီစဉ်ခြင်းဖြင့်ယောက်ျားများအားပြန်လည်ဆန်းသစ်ရန်ကြိုးစားသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်များကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းအဆင့်များစွာရှိသည်။ အစွန်းရောက်ဆုံး (“ သိသာထင်ရှားသည့်၊ “ ခက်ခဲသောနည်းလမ်း” အရသိရှိခြင်း) သည်မည်သည့်လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုကိုမဆိုတားဆီးသည်။ အနည်းဆုံးအစွန်းရောက်လိင်ဆက်ဆံမှုအားလုံးသည်တစ် ဦး တည်းပေါ်ပေါက်လာခြင်းများအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ အမြင်အာရုံအထောက်အကူပြုမရှိဘဲ။ Deem ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်အသိုင်းအဝိုင်း၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်အတူအလားတူနည်းဗျူဟာများပေးထားသည်။ Utah မှလူငယ်များအဖွဲ့သည် Fortify အမည်ရှိဆယ်ကျော်သက်များအတွက်အခမဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်ရှိသည့် Fight the New Drug အမည်ရှိအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။
သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုပြန်ဖွင့်ချင်တဲ့လူငယ်များကဒီအကျင့်ကိုပျက်ပြားစေတဲ့အလားတူအကျိုးဆက်များကိုဖော်ပြကြသည်။ သူတို့ထဲမှအချို့သည်ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်အိပ်ခြင်းကဲ့သို့ဆေးထိုးခြင်းကဲ့သို့သောလက္ခဏာများရှိသည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများက“ Flatlining”၊ ရွှင်လန်းမှုကင်းမဲ့ခြင်း၊ လိင်စိတ်မရှိခြင်း၊ ရက်သတ္တပတ်များစွာကြာနိုင်သည့်ကျုံ့နေသည့်အင်္ဂါများအကြောင်းပြောဆိုကြသည်။ “ ငါဖုတ်ကောင်လိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ယောက်ျားဟောင်းများသည်အလားတူရောဂါလက္ခဏာများကိုတင်ပြကြသော်လည်း၊ များသောအားဖြင့်သူတို့သည်အစစ်အမှန်ဘဝ၌လိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများပိုများသောကြောင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်။ ဘောလုံးကစားသမားသရုပ်ဆောင်တယ်ရီ Crews သည်မကြာသေးမီကစီးရီးတစ်ခုတင်ခဲ့သည် Facebook က သူ၏ညစ်ညမ်းသောအလေ့အထသည်သူ၏အိမ်ထောင်ရေးနှင့်သူ၏ဘဝကိုပျက်စီးစေခြင်းအကြောင်းဗီဒီယိုများ၊ သူဟာ rehab ကိုသွားခဲ့တယ်။ အခြားသူများကပိုမိုလျင်မြန်စွာပြန်ခုန်ထွက်သတင်းပို့ပါ။ ချာ့ချ်က“ ချာ့ချ်ကဒီလိုပြောတယ် -“ ငါဟာပိုပြီးအာရုံစိုက်ခံရပြီးနိုးကြားတယ်၊ လူမှုရေးအရယုံကြည်မှုရှိတယ်၊ တခြားသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တယ်၊ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ်၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးမကြာခင်မှာပဲဒီအပြောင်းအလဲတွေကိုကျွန်တော်စတင်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ပြုလုပ်လေ့ရှိသောကြောင့် NoFap ၏နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်မှာအွန်လိုင်းအရေးပေါ်ခလုတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နှိပ်လိုက်သောအခါအသုံးပြုသူများကိုဤကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှုရှိသောရုပ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဇာတ်လမ်းများသို့မဟုတ်အကြံဥာဏ်များသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည် -“ PMO သည်ရွေးချယ်စရာပင်မဟုတ်ပါ။ အဝါရောင်ဆီးနှင်းကိုစားသောနည်းသည်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကိုတောင်မှထည့်တွက်မထားဘူး။ Brainbuddy app ကိုEndစတြေးလျလူငယ် David Endacott မှတီထွင်ခဲ့ပြီးသူသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စစ်ပွဲ၏ထက်ဝက်သာရှိသည်ဟုသူကပြောသည်။ ဦး နှောက်သည်ကွန်ပျူတာနှင့်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအသစ်များကိုတီထွင်ရမည်။ Fitbit ကဲ့သို့ပင်အက်ပလီကေးရှင်းသည်သုံးစွဲသူများအလေ့အကျင့်ကိုအသုံးမပြုဘဲမည်မျှကြာသွားသည်ကိုလည်းခြေရာခံသည်။ ယခုအချိန်ထိ download ပေါင်း ၃၀၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။
ဤလူငယ်များကအကြံမပေးသောအရာတစ်ခုမှာ၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်လျှင်ပင်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုအဆုံးသတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ရိုဒ်စ်ကဒီလိုပြောတယ် -“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံတွေကိုဥပဒေပြlegisl္ဌာန်းသင့်တယ်၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ညစ်ညမ်းသောဥပဒေကိုပြating္ဌာန်းခြင်းသည်အမြဲတမ်းစိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်၊ ယနေ့ယင်းသည်ပထမပြင်ဆင်ချက်ကြောင့်သာမကနည်းပညာကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကို၎င်းတို့၏စားသုံးသူများ၏သက်တမ်းကိုအတည်ပြုရန်ဗြိတိသျှအဆိုပြုချက်ကိုရင်ဆိုင်ရန်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာအရွယ်ရောက်သူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုကျူးကျော် ၀ င်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲဆယ်ကျော်သက်အများစုသည်အွန်လိုင်းစစ်ထုတ်ခြင်းများကိုအလွယ်တကူဖျက်စီးနိုင်သော်လည်းမည်သို့အလုပ်လုပ်ရမည်ကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ (အစီရင်ခံစာများအရဗြိတိန်ရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသောဆိုက်များသို့ထူးခြားသော visitors ည့်သည် ၁.၄ သန်းသည် ၂၀၁၅ မေလတွင်အင်တာနက်ပံ့ပိုးသူများ၏ opt-in filter များတည်ရှိပြီး ၁၈ နှစ်အောက်ဖြစ်သည်။ ) အမေရိကန်အခြေစိုက် Pornhub ဆိုသောဆိုဒ်တစ်ခုသည်လိုက်နာရန်ကတိပြုထားသော်လည်း အသစ်သောဗြိတိသျှစည်းမျဉ်းများ, စက်မှုလုပ်ငန်းကျန်းမာရေးပြောဆိုမှုများနှင့်ပတ်သက်။ သံသယဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုနယ်စ်က“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်နံပါတ် ၁ ကြိုးစားခဲ့တာကသူတို့ဟာအများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုလက်မခံနိုင်ကြလို့ပါ။ "သူတို့ကတကယ်ကိုအသေးအဖွဲ။ " (Pornhub သည်ဤပုံပြင်အတွက်ဥပဒေပြုခြင်းသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြaboutနာများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်မေးခွန်းများကိုမဆိုဖြေဆိုရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ )
အရွယ်ရောက်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း၏ကုန်သွယ်ရေးအသင်းဖြစ်သော Free Speech Coalition ၏ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူး Mike Stabile က“ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာထိတ်လန့်မှုများစွာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ “ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောသိပ္ပံပညာတစ်ခုလုံးရှိပုံမရပါ။ တစ်ခုခုပေါ်လာရင်ဆွေးနွေးမှုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ” Stabile ကဤသို့ဆိုထားသည် - အင်တာနက်အသုံးပြုသူများသည်အရွယ်မရောက်သေးသည့်အကြောင်းအရာများကိုဝင်ရောက်ခွင့်မပြုသည့်လိင်တူချစ်သူများအဖွဲ့များနှင့်လိင် - ပညာရေးဆိုင်ရာဆိုဒ်များသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ဆို့ထားနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Todd Weiler မှ Utah တွင်အသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သောပုံစံဖြစ်သည်။ Weiler က“ ဆေးရွက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချဉ်းကပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတားမြစ်ခြင်းဖြင့်မဟုတ်ဘဲသင့်တော်သောကန့်သတ်ချက်များချမှတ်ခြင်းကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ သူလိုချင်တဲ့နေရာတွေကိုလိုချင်ပါတယ် မက်ဒေါ်နယ်ရဲ့ နှင့် Starbucks က - နှင့်စာကြည့်တိုက်များ - ညစ်ညမ်းမှုမရှိစေရန်၎င်းတို့၏ဝိုင်ဖိုင်ကိုစစ်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
လူငယ်များအတွက်အဓိကရည်မှန်းချက်မှာဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ မည်သည့် filter များတပ်ဆင်ထားသည်ဖြစ်စေသူတို့မလွှဲမရှောင်ကြုံတွေ့ရမည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ “ အသက် ၁၃ နှစ်နှင့် ၁၄ နှစ်အရွယ်လူငယ်များသည်အန္တရာယ်ရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်နိုင်ကြောင်းသူတို့မတွေ့ရှိမီကန့်သတ်ချက်မဲ့ပြီးအကန့်အသတ်မရှိသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုကြသည်။ သူကကိုကာကိုလာနဲ့ဝေးဝေးနေတယ်လို့သူကပြောခဲ့တယ်၊ သူသည် porn ကိုတူညီသောဆက်ဆံမှုကိုကျောင်းများနှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလအတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအကြောင်းသင်ကြားပေးသည်ကိုတွေ့မြင်လိုသည်။ “ သားကိုပြောပါရစေ၊ မင်းနဲ့အတူရှိနေမယ်၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၊ အမြန်စွန့်ပစ်အစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများစသည့်အလွန်အကံျွဆန့်ကျင်သောအရာများသည်ခေတ္တပျော်စရာကောင်းပြီးပျော်စရာကောင်းနိုင်သည်” ဟု Deem ကဆိုသည်။ "ဒါပေမယ့်၊ သူတို့ကသင့်ကိုသာမန်သဘာဝအရာတွေအတွက်အာရုံမစိုက်နိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာသင့်ကိုသူတို့ပေးလိမ့်မယ်လို့ထင်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားနိုင်စွမ်းပါပဲ"
ကျောင်းတွင်လိင် ed မှ porn မိတ်ဆက်ခြင်းတစ် quixotic ရှာပုံတော်ထင်ရပေသည်။ လိင်ပညာရေးပြီးသားအများကြီးပဋိပက္ခ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး, ကျောင်းများသည်၎င်း၏ဆိုးကျိုးများ၏သိပ္ပံအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်ရင်တောင်ညစ်ညမ်းကလေးတွေကိုမိတ်ဆက်စွပ်စွဲခံရဖို့ဆန္ဒရှိကြပါဘူး။ မိဘများလည်းဘာသာရပ် broaching သတိထားမေးခွန်းများကိုမေးမွနျးစေခြင်းငှါအဘယျအရာကိုကြောက်နေကြတယ်။ သို့သော်သိချင်စိတ်တစ်ခုလေဟာနယ်ဘွယ်; အွန်လိုင်း porn အများအပြားလူငယ်များအဘို့အက de facto လိင် ed ဖြစ်လာနေသည်။
လိင်ဆိုင်ရာပညာပေးသူဟောင်း Whitlock ကသူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် porn အကြောင်းပြောဆိုရန်တွန့်ဆုတ်နေသောကြောင့်သူမအံ့အားသင့်မိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူမယုံကြည်သည်မှာလိင်ပညာပေးသူများသည်နှစ်ပေါင်း abstinence- သာပညာရေးနှစ်များတွင်လိင်အပျက်သဘောဆောင်သောပုံရိပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေကြသောကြောင့်၎င်းတို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစာစားချင်စိတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်စရာများနှင့်မတည့်ပါ။ ကျောင်းသားများအနေဖြင့်သူတို့၏စောင့်ကြည့်ခြင်းအလေ့အထများသူတို့၏စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်ဘာတွေလုပ်နေသည်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်တောင်းဆိုခြင်းသည်ပင်တွန်းလှန်မှုနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။ သူဒီလိုပြောတယ် -“ ဒါကကျွန်မအတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ “ Dunkin 'Donuts သည်အစာစားခြင်း၏တန်ဖိုးကိုသင်' အစားအစာအနုတ်လက္ခဏာ 'ဟုတစ်ချိန်လုံးစားခြင်း၏တန်ဖိုးကိုမေးခွန်းထုတ်ပါကပြောခြင်းနှင့်တူသည်။
မက်ဆေ့ခ်ျပို့ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာအွန်လိုင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ဖြစ်ချင်သည်မှာဤအားထုတ်မှုအများစုသည်ညစ်ညမ်းသောပိတ်ဆို့သူများအားတားဆီးထားသည်။ ဒါ Brainbuddy အတွက်ပြaနာပဲ။ ၎င်းကိုဖန်တီးသူက၎င်းကို ၁၂ နှစ်နှင့်အထက်လူအုပ်ကြားရန်အရေးကြီးသည်ဟုယူဆသော်လည်းသုံးစွဲသူများသည်၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အသက် ၁၇ နှစ်ကျော်ရမည်။
အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များကမည်သူမဆိုဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုသော်လည်းညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအလေ့အထကြောင့်အရှက်ကွဲခြင်းသည်အကူအညီတောင်းခံရန်ခက်ခဲစေသည်။ ထို့နောက်လိင်မှုကိစ္စကိုဂုဏ်ပြုသည့်ယဉ်ကျေးမှု၌အမျိုးအစားကိုဆန့်ကျင်သောလူငယ်များအတွက်ပြောင်းပြန်အမည်းစက်ရှိသည်။ Deem နှင့်အခြားထောက်ခံသူများသည်သူတို့လျစ်လျူရှုမှု၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကဖျောင်းဖျမရခဲ့ဘူး။ “ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ရာသည်ပြောင်းလဲသွားပါကတုတ်ကျင်းတစ်လျှောက်ဖြတ်သန်းသွားသောယောက်ျားများ၊ အမှန်တကယ် tabs များကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင်အမာခံရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနေသည့်ယောက်ျားများကိုဖြတ်သန်းရလိမ့်မည်။
ရက် ၃၀ အတွင်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သောလိင်တူချစ်သူအမျိုးသား Fapstronauts ဟုလူသိများသော NoFap အသင်းဝင်အသစ်တစ် ဦး ကဤအရာကိုဤသို့ဖော်ပြသည် -“ ငါစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါနှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်သွားသည်။ ဘဝကကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုမရှာဖွေနိုင်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေသည်။